ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ တို့သည် မုံရွာမြို့၊ ရွှေစည်းခုံစေတီတော် သာသနာ့ဗိမာန်၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော ပန္နရသမအကြိမ် စုပေါင်းဝါဆိုသင်္ကန်း၊ ဆွမ်းဆန်တော်နှင့်ဆီ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲ မဟာမင်္ဂလာ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခဲ့ – စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ဒုတိယအကြိမ် အရေးပေါ်အစည်းအဝေး အစီအစဉ်များ
ဒုတိယအကြိမ် အရေးပေါ်အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ
ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ တို့သည် မုံရွာမြို့၊ ရွှေစည်းခုံစေတီတော် သာသနာ့ဗိမာန်၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော ပန္နရသမအကြိမ် စုပေါင်းဝါဆိုသင်္ကန်း၊ ဆွမ်းဆန်တော်နှင့်ဆီ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲ မဟာမင်္ဂလာ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခဲ့
ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌသည် (၂၆-၇-၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာမြို့ ၊ ရွှေစည်းခုံစေတီတော် သာသနာ့ဗိမာန်၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော ပန္နရသမအကြိမ် စုပေါင်းဝါဆိုသင်္ကန်း၊ ဆွမ်းဆန်တော်နှင့်ဆီ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲ မဟာမင်္ဂလာ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်၍ ဆရာတော်၊ သံဃာတော် အရှင်သူမြတ်တို့အား ဝါဆိုသင်္ကန်း၊ ဆွမ်းဆန်တော်၊ ဆီနှင့် လှူဖွယ်ဝတ္တုပစ္စည်းများ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၂၅)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (တတိယနေ့) ဆက်လက်ကျင်းပ
၁။ ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၂၅)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး တတိယ နေ့ကို ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၁၆)ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)၊ (၁၀:၀၀)နာရီအချိန်တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ တက်ရောက်ခွင့်ရှိသည့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(၇၃)ဦး၊ …
ကော်မတီ / ကော်မရှင်များ
© Copyright 2016, All Rights Reserved. This is the official website of Sagaing Region Hluttaw. Powered by Host Myanmar.